Iyada oo in ka badan 40,000 xaaladood oo cusub oo COVID ah 2 maalmood gudahood Hindiya ayaa weydiisatay laba gobol inay soo saaraan bandow
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Iyada oo in ka badan 40,000 xaaladood oo cusub oo COVID ah 2 maalmood gudahood Hindiya ayaa weydiisatay laba gobol inay soo saaraan bandow
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dowladda Hindiya ayaa weydiisatay gobollada Kerala iyo Maharashtra inay tixgeliyaan bandowga habeenkii maadaama kiisaska cusub ee COVID ay soo kordhayaan.
Hindiya ayaa soo sheegtay in ka badan 40,000 infekshanno cusub oo COVID-19 ah laba maalmood oo xiriir ah Jimcihii.
Infekshannada cusub ee coronavirus ayaa aad ugu kordhay Hindiya saddexdii maalmood ee la soo dhaafay.
Kerala wuxuu ku dhawaad ​​60% ka ahaa kiisaska cusub usbuucii la soo dhaafay, waxaana ku xigay 16% Maharashtra.
Dowladda dhexe ee Hindiya ayaa ku boorrisay gobollada Kerala iyo Maharashtra inay soo rogaan bandow habeenkii ah oo leh aagag leh tirooyinka caabuqa coronavirus sida Hindiya ay diiwaangelisay in ka badan 40,000 kiis oo cusub oo COVID-19 ah laba maalmood oo xiriir ah maanta.
Kiisaska Coronavirus wuxuu hoos ugu dhacay 5-bilood oo ahaa 25,166 badhtamihii bishii Ogosto laakiin aad buu u kacay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay, gaar ahaan Kerala oo dhawaan qabatay xaflad weyn oo inta badan qoysasku isugu yimaadaan.
Hindiya ayaa soo sheegtay 44,658 caabuq oo cusub oo COVID-19 Jimcihii, taas oo wadarta guud ka dhigaysa 32.6 milyan, oo ah tan ugu badan adduunka kadib Mareykanka. Dhimashadu waxay sare u kacday 496 ilaa 436,861.
Kerala, oo ku taal cirifka koonfureed ee Hindiya, ayaa lagu qiyaasay ku dhawaad ​​60 boqolkiiba kiisaska cusub usbuucii la soo dhaafay iyo in ka badan kala bar wadarta kiisaska firfircoon, oo ay ku xigto 16 boqolkiiba gobolka galbeedka Maharashtra.
"Dadaallo dheeri ah ayaa loo baahan doonaa si loo xiro kororka cudurrada," wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay fiidnimadii Khamiista ka dib markii xoghayaheeda uu kulan la qaatay labada dowladood, kaas oo Kerala iyo Maharashtra laga codsaday inay "sahamiyaan suurtagalnimada in bandow habeenkii lagu soo rogo meelaha ay aad u wanaagsan tahay".
Wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in sahay dheeri ah oo tallaallada COVID-19 ah loo diri doono labada gobol.
Hindiya ayaa ilaa hadda maamushay in ka badan 611 milyan oo tallaal oo tallaal ah, iyada oo ugu yaraan hal qiyaas siisay in ka badan kala bar 944 milyan oo qof oo qaangaar ah halka labadii qiyaasood ee loo baahnaa ay ka dhigtay qiyaastii boqolkiiba 15.